SARCOIDOSISUK Support Group
ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်လွှားပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များတစ်ဦးတိုးပွားလာ run SarcoidosisUK ။ ဒီအုပ်စုတွေကိုသင် sarcoidosis သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေဖို့, သင်မှတဆင့်သွားနေသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေလေ့လာသင်ယူသူတွေကိုအားဖြင့်ကြားသိစေခြင်းငှါအဘို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်အခြားလူများထံသို့ Talking အလွန်လွတ်မြောက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အခြားမည်သူမဆိုမတူဘဲ, သူတို့သညျတစျဆငျ့ကိုသွားနေကြတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ်။ SarcoidosisUK ရဲ့ပံ့ပိုးမှုအုပ်စုကွန်ယက်ကိုဗြိတိန်အနှံ့အတူတကွထိခိုက်လူတွေတတ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုများကယ့်ကိုဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်အသိုင်းအဝုိင်းစင်တာများ, စာကြည့်တိုက်များနှင့်အခြားအများပိုင်နေရာများသည်4သို့မဟုတ်6ပတ်တွေ့ဆုံရန်။ အဆိုပါအုပ်စုများသူတို့ကိုယ်သူတို့ sarcoidosis ကြသူ volunteers များ run သောနေကြသည်။
sarcoidosis နှင့်အတူလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအုပ်စုများမှာကျွန်တော်တို့ကို join ဖို့ကြိုဆိုသည်။ သင်တစ်ဦးဖက်, အနီးကပ်ဆွေမျိုး, မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းရောက်စေဖို့ကြိုဆိုကြသည်။ အားလုံးနေရာများကိုအလွယ်တကူလက်လှမ်းဖြစ်ကြပြီးအပြည့်အဝကိုပိတ်ထားလက်လှမ်းရှိသည်။
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိမြေပုံကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံး SarcoidosisUK Support Group မှကိုရှာပါ။ ကြောင်းတည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကကိုရှာဖွေအနီရောင်အမှတ်အသားကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ လာမည့်အစည်းအဝေးများမှလက်မှတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ '' နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤသည် RSVP ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောလူမတက်ရောက်ပါလိမ့်မည်မည်သို့ကောင်းတစ်စိတ်ကူးပေးသည်။ လက်မှတ်တွေကအမြဲရှိပါတယ် အခမဲ့ တစ်ဦး optional ကိုလှူဒါန်းခြင်းနှင့်အတူ။
သင့်ရဲ့ဒေသတွင်း၌လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ SarcoidosisUK ဒေသဆိုင်ရာ Facebook ကအဖွဲ့များကို Join:
Cornwall နှင့် Devon
လာမည့် SarcoidosisUK ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များ:
Bristol က - 15 ဇန်နဝါရီလ
မြောက်အမေရိက Kent - 21 ဇန်နဝါရီလ
ဗဟိုလန်ဒန် - 22 ဇန်နဝါရီလ
လိဒ် - 23 ဇန်နဝါရီလ
Burton - 27 ဇန်နဝါရီလ
Plymouth - 2nd ဖေဖော်ဝါရီလ
Bristol က - 19 ဖေဖော်ဝါရီလ
လိဒ် - 20th ဖေဖော်ဝါရီလ
ဘဲလ်ဖတ် - 23 ဖေဖော်ဝါရီလ
Hampshire ပြည်နယ် - 23 ဖေဖော်ဝါရီလ
ဗဟိုလန်ဒန် - 26 ဖေဖော်ဝါရီလ
မြောက်အမေရိက Kent - 4th မတ်လ
Northampton -6မတ်လ
Bristol က - 19 မတ်လ
လိဒ် - 23 မတ်လ
Woodbury - 23 မတ်လ
အဘို့ မောင်းနှင်မှု လမ်းလျှောက် အကူးအပြောင်း စက်ဘီးစီး ပြပွဲ options များ ဝှက် options များ
လမ်းသုံးခများရှောင်ကြဉ်ပါ အဝေးပြေးရှောင်ကြဉ်ပါ ကူးတို့များရှောင်ကြဉ်ပါ
သင်က SarcoidosisUK Support Group မှ Run ဖို့ကိုကူညီပါနိုင်သလား? ...
သငျသညျ sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်နှင့်သင့်ဧရိယာထဲမှာထောက်ခံမှုအုပ်စုတစ်စုကိုကြိုက်ပါ့မလား သင်တစ်ဦးထောက်ခံကြောင်းအုပ်စုတစ်စုကို run ရန်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိပါသလား? သငျသညျ sarcoidosis နှင့်အတူဒေသခံပြည်သူများကကူညီမယ့်နာရီအနည်းငယ်တစ်လပေးနိုင်သလား?
SarcoidosisUK ထောက်ခံမှုအုပ်စုများ၏အမျိုးသားရေးကွန်ယက်ကိုတည်ထောင်နိုင်ရန်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် sarcoidosis နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံကလူတိုင်းအခြေအနေကိုနှင့်အတူနေထိုင်နေအခြားသူတွေတွေ့ဆုံရန်နိုင်ဖြစ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဧရိယာထဲမှာအုပ်စုတစ်ခုလိုခငျြနှငျ့သငျအုပျစုဦးဆောင်လမ်းပြကူညီဖို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကအဆက်အသွယ်ရရန်သို့မဟုတ်အောက်က form မှာဖြည့်ပေးပါ။ ကျနော်တို့ကဖြစ်ပျက်စေကူညီရန်အတွေ့အကြုံနှင့်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရှိသည်။
SarcoidosisUK သေးငယ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုများမှာ - ငါတို့သည်မြေပြင်ကိုချွတ်သည်ဤအုပ်စုများရဖို့သင်တို့ကဲ့သို့သောလူအပေါ်မှီခို!
သငျသညျအနီးတစ် SarcoidosisUK Support Group မှလိုပဲသင်ဟာမလား
SarcoidosisUK ထောက်ခံမှုအုပ်စုများ၏အမျိုးသားရေးကွန်ယက်ကိုတည်ထောင်နိုင်ရန်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် sarcoidosis နှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံကလူတိုင်းအခြေအနေကိုနှင့်အတူနေထိုင်နေအခြားသူတွေတွေ့ဆုံရန်နိုင်ဖြစ်သင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဲဒီဒေသမှာဝယ်လိုအားလည်းမရှိဆိုပါကနယူးထောက်ခံမှုအုပ်စုများသာစတင်ပါ။ သငျသညျအနီးအဘယ်သူမျှမထောက်ခံကြောင်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုရှိလျှင်စိတ်မကောင်းပါဘူး - သူတို့အဲဒီဒေသမှာလုံလောက်အောင်အကျိုးစီးပွားနှင့်တစ်ဦးဆန္ဒရှိစည်းရုံးရေးမှူးအပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ သင်အနီးတွင်အုပ်စုတစ်ခုလိုပါလျှင်အနာဂတ်အုပ်စုတစ်စု၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့အောက်ကပုံစံကိုဖြည့်ပါပါ။
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စတင်လိုက်တာနဲ့လျှင် SarcoidosisUK ပြီးနောက်သင်ဆက်သွယ်ပါရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ကြာကြာမှတ်ချက်များနှင့်မည်သည့်ပြဿနာမျှကျေးဇူးပြုပြီးများအတွက် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ သငျသညျများကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို SarcoidosisUK အားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုစေခြင်းငှါပေမယ့်တတိယပါတီနှင့်အတူဝေမျှဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။
ကျွန်တော် .... ချင်ပါသည်... ကျွန်တော် .... ချင်ပါသည်...အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တက်ရောက်မည်အုပ်စုအသစ်စတင်ပါကိုကူညီပါ(ကိုဖော်ပြရန်ကျေးဇူးပြုပြီး) အခြား
ဒေသ ဒေသလန်ဒန်အရှေ့တောင်အနောက်တောင်အရှေ့မြောက်အနောက်မြောက်တောင်MidlandsWest Midlands မှာလည်းYorkshire နှင့် Humberအရှေ့ Angliaစကော့တလန်ဝေလနယ်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်
အနီးဆုံးမြို့ / မြို့
ငါ SarcoidosisUK တစ်ထောက်ခံမှုအုပ်စုတစ်စုတက်ရောက်ရန်ရှာဖွေနေသည်အခြားဒေသခံပြည်သူများ (အီးမေးလ်သာ) နှင့်အတူထိတွေ့၌ငါ့ကိုထားရန်အဘို့အဝမ်းသာတယ် ငါ SarcoidosisUK တစ်ထောက်ခံမှုအုပ်စုတစ်စုတက်ရောက်ရန်ရှာဖွေနေသည်အခြားဒေသခံပြည်သူများ (အီးမေးလ်သာ) နှင့်အတူထိတွေ့၌ငါ့ကိုထားရန်အဘို့အဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဘယ်သူမျှမ